U-Çetin Emeç Usondela Ekupheleni Kwe Bridge Esidlula Kakhulu - RayHaber
IkhayaTURKEYIsifunda saseMarmara41 KocaeliU-Çetin Emeç Usondela Ekupheleni kwe-Overpass Bridge
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, JIKELELE, Highway, Isifunda saseMarmara, TURKEY 0
i-cetin emecte esondela ekugcineni
UMasipala waseKocaeli Metropolitan uyaqhubeka nokuletha amandla amakhulu amasha kanye nesimanje edolobheni futhi uyaqhubeka nokusebenza kulo msebenzi. Imishini neminye imisebenzi yokwakha iyaqhubeka e-Çetin Emeç Overpass Bridge, isidumbu sayo sensimbi sibekwe emilenzeni ngenyanga edlule. Ngokuhambisana nemisebenzi yoMnyango Wezesayensi, ukukhiqizwa kwama-elevator kanye ne-facade kuyaqhubeka.
I-TARTAN ye-Slip engazethembi kahle izokwakhiwa
Ngaphansi kohlaka lwephrojekthi, ukuqothuka kokudlula ngokweqile kuqediwe kwafakwa nezibani zokukhanyisa phezu kokudlula. Ukukhiqizwa kwe-lifter kanye ne-facade ye-overpass, okuqhubeka njengamanje, kuzokwenziwa ngomgwaqo ongagxiliwe wesitayile emzimbeni omkhulu naphansi wesitezi. Ukwenziwa komhlaba kanye nomgwaqo osendleleni ye-overpass yesimanje nakho kuzofezeka.
I-95 TON STEEL ISEBENZISWA
I-Çetin Emeç Overpass entsha yakhiwa ngamamitha angama-39 ubude. Amathani we-80 wensimbi, amathani we-15 wensimbi yokuqinisa kanye ne-115 cubic metres kakhonkolo asetshenziselwa ukukhiqizwa okudlula. Isembozo esiyimitha sikwele, i-33, imbobo yokuhlanganisa, 192 isikwele, isigxathu se-cover facade, ikhamera yezokuphepha ye-4, ukwenziwa kwe-19 ukukhanyisa izinto zokwakha kanye nemisebenzi yengqalasizinda kagesi yenzelwe ukukhiqizwa kukagesi nokwenziwa ngogesi.
IZINSUKU ZESIBILI zizOSEBENZELA AMAKHENSI
Ekwedluleni okusha kwesimanje, izinyusi ezimbili zizokhonza izakhamizi. UMasipala Metropolitan uzogcina ibhuloho elidlula le livulekile kuze kube kuvulwa ibhuloho elisha ukuvimba izakhamizi ukuwela umgwaqo. Izakhamizi ezihlala esifundeni futhi ezihlala zisebenzisa i-Çetin Emeç Overpass ziyakwamukela ukwakhiwa kwe-Çetin Emeç Overpass entsha.
I-Çetin Emeç i-Overpass ivuselelwe 21 / 03 / 2019 Ngaphandle kwezimoto ezisemgwaqeni, uMasipala waseKocaeli, okwenza abahamba ngezinyawo bakwazi ukuqhubeka kahle, uyaqhubeka nokuletha abahamba ngezinyawo ezintsha edolobheni. I-Çetin Emeç Overpass, esendaweni ye-Yenidoğan yase-İzmit, izobhujiswa ngoba idala futhi ayihlangabezani nezidingo, futhi izakhiwo zanamuhla zizokwakhiwa esikhundleni sokwakhiwa kwensimbi. Inkampani ye-4 ithumele ithenda le-overpass entsha. I-OVERPASS E-DOUBLE ELEVATOR I-Çetin Emeç Overpass esanda kwakhiwa iyoba nobude be-39 nobubanzi bamamitha angu-3. Ngokuphelele, amathani we-2 ensimbi azokwenziwa endaweni ephezulu lapho i-elevator ye-78 izosetshenziswa khona. Steel ...
Kuqala Ukuqalwa Kwe-Cetin Emme Yedlula 22 / 08 / 2019 Phezu kwezimoto ezihamba ngezimoto, uMasipala waseKocaeli Metropolitan, ohlinzeka ngendlela enethezekile yabahamba ngezinyawo ukuthi baqhubekele phambili, iyaqhubeka nemizamo yayo yokuletha ukweqile kwabahamba ngezinyawo edolobheni. I-Çetin Emeç Overpass endaweni yaseYenidoğan e-İzmit iyasuswa nguMasipala weMetropolitan futhi ifakwe esikhundleni sombhalo wensimbi wanamuhla kusuka ekuqaleni ngoba indala futhi ayikwazi ukufeza izidingo. Ukudlula kwensimbi eyakhiwayo kuzotholakala kwizakhamizi kuze kuvulwe i2019-2020 Septhemba 9 Septhemba 2019. UKUFAKWA KWESIQHAWU ESISHA KUYAQHUBEKA UMnyango Wezesayensi Yezemisebenzi Metropolitan, obumba ukwedlula konke okuzoshintsha ubuso bendawo ngokubukeka kwayo kwesimanje…
Isidumbu Esikhulu se-Çetin Emeç Edlula Kakhulu 14 / 09 / 2019 Phezu kwezimoto ezihamba ngezimoto, uMasipala waseKocaeli Metropolitan uyaqhubeka nemizamo yawo yokuletha amandla okuhamba ngezinyawo amasha futhi anamuhla edolobheni. I-Çetin Emeç Overpass, etholakala endaweni yase Yenidoğan e-mitzmit, icekelwa phansi nguMasipala we Metropolitan ngoba indala futhi ayihlangabezani nezidingo. Ngemuva kokuphothula ukunqotshwa kwesisekelo esisha sokweqiwa, uMnyango Wezesayensi wenza ukufakwa kwezinyawo nezinsika zesiteji sokudlula kwensimbi. Amaqembu kaMasipala Metropolitan, i-14 Septhemba ngoMgqibelo ebusuku, abagqokile bazokwenza umhlangano omkhulu womzimba. IZIMBANGELA ZOKUGQIBELA NEZOBUCHWEPHESHE ZIYENZIWE Ukubukeka okusha okuzoshintsha ubuso bendawo ngokubukeka kwayo kwanamuhla ...
3. Kusondela ekupheleni kweBhulorus yaseBosphorus 22 / 01 / 2016 Ukusondela ekupheleni kweBhulorus yaseBosphorus: i-2013, ukwakhiwa kwayo okwaqala ngo-3, kubiza amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingu-3. Ibhuloho laseBosphorus kanye neProjekthi yaseNyakatho yeMarmara Motorway yashiya imitha ye-391 ekuhlanganiseni kwamazwekazi amabili ngemoto nokuqeqesha. Umsebenzi uqhubeka e-Yavuz Sultan Selim Bridge, lapho uNgqongqoshe wezokuThutha, uMaritime Affairs and Communications Binali Yildirim usanda kumemezela ukuthi i-2016 izovulwa ngoJulayi noma ngo-Agasti. Umhlangano nokukhwelisa i-923 kusukela emgodini we-59 we-steel, okwamanje yiyona ithoni enkulu kunazo zonke ze-42, iphelile ngesikhathi igebe phakathi kwamazwekazi amabili seliye lalinganiselwa kumamitha angu-391. Umhlangano wensimbi yensimbi nenqubo yokuxhuma ebizwa ngokuthi "Lifting Gantry ...
Ukudlulela ngokweqile nokweqa uhlelo lweProjekthi Ukuphela 16 / 05 / 2016 I-Overpass ne-Underpass Project Efinyelelwe: I-TCDD Afyon 7 eya Emet nase-Kuruçay ezingeni le-Tavşanlı esifundeni saseKütahya. Okhulumela uMeya uMustafa Güler e-Ankara mayelana nomklamo ohamba phambili wemoto nokuhamba ngezinyawo ezizokwenziwa nguMqondisi wesiFunda uyaqhubeka. UMeya u-Mustafa Güler, ohlala exhumana nezikhungo ezifanele eMnyango WezokuThutha, uMnyango WezokuThuthukiswa Kwezilwandle kanye ne-Journalism, uthe izingxoxo zisezingeni lokugcina. I-TCDD 7. Ukuqondiswa kwezifunda kanye nemigwaqo emikhulu. UMeya u-Mustafa Güler uthe izingxoxo noMqondisi Wezifunda zinezithelo futhi ukuphela kusondela.
I-Çetin Emeç i-Overpass ivuselelwe
Kuqala Ukuqalwa Kwe-Cetin Emme Yedlula
Isidumbu Esikhulu se-Çetin Emeç Edlula Kakhulu
3. Kusondela ekupheleni kweBhulorus yaseBosphorus
Ukudlulela ngokweqile nokweqa uhlelo lweProjekthi Ukuphela
Izmit Bay Crossing Izinyathelo kuze Ekupheleni
Kusondela ekupheleni kweBroad Bridge
I-Ankara Sivas YHT Project Isondela Isinyathelo ngesinyathelo
Ibhuloho le-Karamürsel Semetler liphele
Kusondela ekupheleni kweSakarya Yeni Bulvar Prjeosi